Diarin’ny COVID-19 avy ao Wuhan : « Vita ihany ny mivelona amin’ilay valanaretina, fa tsy telina ny fanilikilihana, ny tahotra ary ny fankahalàna. » · Global Voices teny Malagasy
Fizaràna faha-13 amin'ny diary momba ny Covid-19 avy ao Wuhan
Nandika (fr) i Chloé Matz
Voadika ny 21 Mey 2020 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, Ελληνικά, Deutsch, বাংলা, عربي, Filipino, English
Ankizy milalao eny an-tokotany. Sary an'i Guo Jing, nahazoana alàlana.
Ny diary etsy ambany no faha-telo ambinifolo amin'ny andiany « diary manokana » nosoratan'ilay tsy miankina mpamokatra sarimihetsika sady feminista oniversitera Ai Xiaoming [zh] ary ilay feminista mpikatroka Guo Jing [zh]. Samy mipetraka ao Wuhan, foibe niandohan'ilay valanaretina Covid-19 ry zareo. Ireto rohy manaraka ireto dia hitondra anao mankany amin'ny voalohany, faharoa, fhatelo, fahefatra, fahadimy, fahenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo, faha-iraikambinifolo ary ny faha-roambinifolo amin'ilay andiany.
Diary nosoratana teo anelanelan'ny 20 sy 22 Martsa 2020 izy ireo. Ny Matter News no namoaka ny dika amin'ny teny shinoa tamin'ireny diary ireny.
Guo Jing : 20 Martsa 2020
Nisy olona nandefa hafatra tao amin'ny vondronay ety anaty tambajotra : mety mbola ho voatsirika indray hoe mitondra ny valanaretina, mampiseho na tsia ny soritraretina, ireo marary sasantsasany efa sitrana tamin'ny Covid-19. Ity vaovao manaraka ity aza tena mbola mampivarahontsana. Aleo ny ankizy tsy alefa mivoaboaka any ivelany na hitondra ny alikany hikarenjy aloha loatra. Tsy tokony hanao tandrametaka isika.
Tena nisy akony io hafatra io. Betsaka hafatra toy izany nifampitampitàn'ireo olona tao anatin'ny vondrona. Nanomboka velona ahiahy aho ho an'ireo olona tsy sahy nivoaka ny tranony. Rahoviana vao mba ho maivamaivana ny saina amam-panahin'izy ireny?
Guo Jing : 21 Martsa 2020
Na eo aza ny fihibohana, mitohy miraraka ihany ny lazambidy (faktiora) na dia tsy mandray vola aza ny olona maro. Niteraka olana ara-bola nidona tamina olona maro ny fihibohana. Efa ho volana roa ny faritanin'i Hubei no nihiboka, voadona be tamin'izany ny sehatry ny varotra. Iray amin'ireo namako any Hubei no mitatitra hoe nanomboka nanao varoboba ny akohony ny mpiompy iray, misy aza omeny maimaimpoana mihitsy, satria tsy misy intsony ny hividianana izay hafàhana azy ireny mandritra ny fihibohana.
Goavana ny rarintsaina ara-bola sy psikôlôjika, ary efa tonga amin'ilay mahafaty mihitsy ny tsindry mahazo. Betsaka ireo firenena nanao famatsiana ny vahoaka ao aminy. Maneho ny lentan'ny andraikitry ny governemanta iray ny fepetra tahaka izany. Tsy maintsy ampiantsika ireo olona tsy afaka mahita vahaolana amin'io olana io, fa tsy hoe ahilikilika.
Ai Xiaoming : 22 Martsa 2020
Miditra amin'ny andro faha-60 fihibohany izao i Wuhan. Tony ny fiainana eto amin'ny fari-ponenana misy ahy. Mihira ny vorona ary mitsiry ny ahitra. Tsy ela dia hivelatra ny vonin'ireo “cerisiers” japoney eto alohan'ny varavarako. Mihitsoka any an-tranony daholo ny rehetra. Mba hahazoana alàlana mivoaka rehefa vita ny fihibohana dia mangataka anay hanavao tsy tapaka ny sata avoakanay ety an-tambajotra ny solotena isam-bohitra [olona tomponandraikitra manangona ireo torohay sy ny fitantànana ara-tsôsialy isam-bohitra [en]. Omeko isanandro ihany koa ireo torohay momba ahy manokana : « Ao an-tranonao ve ianao ? – Eny. - Araka ny tokony ho izy ve ny hafanànao? – Eny. – Tranonao mihitsy ve ilay ipetrahanao sa an'olona hafa ? – Ato an-tranoko mihitsy aho. – Firy ny olona miaraka mipetraka aminao ao ? »… Fanampin'izay, isanandro aho dia tsy maintsy manao tombana amin'ny alàlan'ilay fampiasa an-tambajotra « Hubei Health Code ». Raha fehezina, mangarahara toy ny fitaratra ireo torohay momba anay.
Mbola manohy manaiky izahay. Mbola manohy miandry an'ireo solotena mba hanapaka izay hiafarànay. Izao, miandry ny fanafoanana ny fihibohana aty amin'ny distrikanay. Farany, afaka ny hivezivezy malalaka any ivelany ihany izahay, hividy sakafo any an-tsenabe sy handeha hamangy namana. Farany, ho afaka hihazakazaka manodidina ny farihy. Fa dia inona loatra no nanosika anay hiaritra izany rehetra izany ? Tsy te-harary izahay, te-ho tafavoaka velona amin'ity valanaretina ity.
Androany, tafavoaka velona izahay ary niova ny tontolo. Heverinareo ve fa hiverina ho toy ny andavanandro ny zavatra rehetra?
Any Canton no misoratra ny trano fonenako, saingy aty Wuhan aho izao no mipetraka, araka izany dia nilazana aho fa, manomboka izao, tsy ananako ny zo handeha any Beijing na any Canton… Raha aotra ny isan'ireo tranga vaovao androany, ary raha azo inoana ireo lazaina fa fepetram-pahasalamàna sy ny rafitra fampitambaovao isam-bohitra momba ity valanaretina ity, dia tokony eritreretina hoe salama daholo izahay rehetra ary efa voahilika ilay viriosy. Nahoana izahay no tsy afaka ny handeha any amin'ny toerana isoratan'ny fonenanay na ny toerana fiasànay ?
Raha toa izahay ampangaina ho mpitondra valanaretina nefa tsy ahitàna soritraretina vokatr'ilay viriosy, inona no dikan'ny namoahanay tsy tapaka ny tatitra sy ny momba ny fahasalamanay isanandro ?
Angamba ireo mponina avy any amin'ireo faritra nisy aretina, tsy ijerena izay momba ny toepahasalamàny any, dia heverin'ireo faritra hafa rehetra ho « loza mananontanona » avokoa.
Ireo rehetra notanisaina tetsy ambony dia vokatry ny rafi-pisainana nivoaka avy amin'ny sain'ny olona fa tsy misy idiran'ny resaka antontanisa. Voahilika ao anatin'io rafi-pisainana io ny fihetsehampon'ny tsirairay, ny zony ary ny fahamendrehany. Ny fitsaràna an-tendro sy ny tahotra an'ireo olona avy any Hubei no mifàka any anaty fanahin'ny olona.
Vitan'ny olona iray ihany ny mivelona amin'ilay valanaretina, fa tsy ny habibiana, ny tahotra ary ny fankahalàna »
Rehefa tsy vitan'ny olona intsony ny mizaka toedraharaha iray manahirana, ny fomba tsotra indrindra hialàna amin'izany dia ny mitady izay hasolo vaika ny ankalana. Azon'ny governemanta atao ihany koa ny mampihatra ilay fikafika fanarian-dia ny sain'ny vahoaka, fanamaivanana ny krizy pôlitika ary miala andraikitra. Fanao efa fahagola izany, saingy tena mety tsara mba hialàna bàla.
Tsy voafetra fotsiny ho amin'ny remdésivir [fanafody trandrahana amin'izao fotoana izao ho entina hanasitranana ny Covid-19 [fr] ny fanantenantsika. Ny fanantenantsika dia mifototra amin'ny fahafahantsika mahatsapa alahelo ho an'ireo niharam-boina tamin'ilay valanaretina….Ny fitserana no fanafody voalohany entina hanamaivana ny hirifirin'ny hafa.
Guo Jing : 22 Martsa 2020
Androany, minisitra dimy, anisany ny misahana ny sidina sivily ao Shina [Civil Aviation Administration of China (CAAC)], no nanambara fa tokony ho any amin'ireo seranampiaramanidina hafa no hipetraka ny sidina iraisampirenena rehetra tokony ho any Beijing, toa an'i Tianjin sy Shijiazhuang. Vantany vao mahavita ny dingana rehetra amin'ny fanamarinana sy ny fihibohana ireo mpandeha, dia ho azon'izy ireo atao ny mandray iny sidina iny ihany mamonjy an'i Beijing. Io vaovao io dia nanosika ahy hahatsiaro ilay olona iray ‘elitista’ avy ao Beijing sady be avona, miaraka amin'ilay fiteniny tsy afaka am-bavany hoe « izahay, avy ao Beijing… » .
Mahafatifaty an-dry zareo avy ao Beijing ny sata maha-renivohitra pôlitika azy ka mahatonga azy ireo ho kevokevoka. Ananan-dry zareo ny fahafahana mitondra ny hafa ho toy ny fitantavanana mba hampihenana ny isan'ireo tranga avy any ivelany tsy ho tonga any an-tananan-dry zareo. Tsy misy tanàna hafa manana fahafahana tahaka izany. Manana loharano maro isankarazany i Beijing ary tsy maintsy manana antontam-panafody tsy hita noanoa ho entina mitsabo ilay valanaretina. Na izany aza, mbola miezaka ihany ilay tanàna ny hanisaka ny loza ho any amin'ireo tanàna hafa. Tena ohatra ratsy no asehony.
Jereo ihany koa ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraika manerantanin'ny Covid-19.